कोरोनाको निशानामा बाँकेका युवा
ह्वाइट हाउसलाई ‘आइसोलेशन सेन्टर’, ईलाका कोहलपुर र वडा प्रहरी नेपालगन्ज पनि सील
मौरीजस्तै जाँगरिला डिलबहादुर कमाउँछन् वर्षको १२ लाख
बाँकेमा निषेधाज्ञा बढाइयो
कर्णालीका बिद्यार्थी रुख चढेर मोबाईलमा कुरा गर्छन्
फरार दुई अभियुक्त प्रहरीको फन्दामा
सवारी ज्यान मुद्दामा फरार यादव पक्राउ
अख्तियारद्वारा बाँके निकुञ्जका प्रमुखसहित दुई नियन्त्रणमा
सन्दर्भ: २९८ औँ पृथ्वी जन्मजयन्ती
शनिवार, पुष २६, २०७६ सेतोखरी
भोली पुष २७ गते २९७ औं पृथ्वी जयन्ती । पहिलेपहिले भए भोलिकै दिनलाई राष्ट्रले भव्य रूपमा ‘पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस’ भनेर देशव्यापी तवरले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँथ्यो । वर्षको एकदिन भए पनि नेपालीले नेपाल राष्ट्रका एकीकरण कर्ताप्रति श्रद्धापूर्वक सम्झने गर्थे । गर्विलो ईतिहास सुन्न पाएर गौरवान्वित हुन्थे ।
विडम्बना, अहिले कालबेला नै खराब छ । कसैको कुरो कोही सुन्दैन । सबै पुरानो भत्काउने र नयाँ थिति पनि नबसाल्ने गरी अधिक उत्तरआधुनिक भएका छन् । राजनीतिको पुरानो कोर्स बदलिएको छ । नयाँ कोर्समा लेफ्टराइट गर्न सबै सकिरहेका छैनन् । सानो हुँदा सर, मिसहरूले कान निमोठेर यादगर्न लगाएको एउटा श्लोक अझै मुखमा झुण्डिरहेको छ । सायद् कवि शिरोमणी लेखनाथ पौड्यालको उद्गार हो यो –
‘सुन्नेले जब सुन्दैन, भन्नेले मात्र गर्नु के ?
नाङ्गाका देशमा गई, धोबी पाउँछ काम के ?’
प्रसङ्ग एकता दिवसको हो । दुःखको कुरा यतिखेर कसैलाई एकताको मान र महत्व छैन । सबै भाँडिएका र बाँडिएका छन् । यो संक्रमणको समय रहेछ । गर्वगर्न लायक विगतलाई पनि हामी सम्झन नसक्ने गरी लाचार र नादान भएका रहेछौं । यस्तो बेलामा ईतिहास भइसकेको र पञ्चायतले पनि नमन गरेको बूढा राजाका बारेमा बोलेर ‘बोल बोल मछली मुखभरि पानी’ पार्नु मात्रै छ । उनका पक्षमा बोल्दा र लेख्दा कोही खुसी नहुने समय आएको छ । अझ यो लेख पढेर कतिले त धारे हात नै लगाउलान् । तर हामीले आज ईतिहासलाई नमन गरेनौं भने भोली भविष्यले पनि हामीलाई किन र के आधारमा सम्झने होला ? प्रश्न यहाँनेर उभिएको छ । एकैछिन गमेर हेरौं त ?
हामीले पाएको स्वतन्त्रताले हामीलाई ईतिहासलाई सम्मान गर्नु भनेर सिकाएन । अग्रजलाई मान, मनितो दिनु भनेर अह्राएन । आजका नयाँ पुस्ताले हिजोको गर्विलो ईतिहासलाई पढ्न, बुझ्न र मनन् गर्न पाएनन् भने भोली त्यो हामीलाई प्राप्त भएको विराशत नै पनि बिलाएर जान के बेर ? चिन्ता र चासो यस मानेमा हो ।
राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वी जयन्तीका बारेमा अहिले सो जयन्तीका दिन राष्ट्रिय विदा दिने कि नदिने भनेर विभिन्न कोण प्रतिकोणबाट चर्चा र बहस शुुरू भैसकेको छ । कोही पृथ्वीनारायणप्रति अन्धभक्त भई ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ को घोषणा गर्नु पर्ने तर्क राख्दैछन् भने कोहीचाहिँ पृथ्वीनारायणको ईतिहासलाई ‘नामेट गर्न’ नानीदेखिको बल निकालेर लागि परेका छन् । यसरी पृथक दुई कित्तामा बाँडिएका ती दुवैथरी अतिवादी मतावम्बीहरू हुन् । अतिवादले कहिल्यै र कसैको पनि भलो गर्दैन ।
मनोयोगपूर्वक उत्सर्जित आफ्ना विवेकसम्मत तर्कहरू राख्ने स्वतन्त्रता जो कोही सबैलाई छ । त्यसैका लागि त हामीले यत्रो बगावत गरी लोकतन्त्र ल्याउनु परेको हो ।
कसैले माने पनि नमाने पनि पृथ्वीनारायण शाह नेपाल राष्ट्रका एकीकरणकर्ता हुन् । राष्ट्रनिर्माता हुन् । जसरी जर्मनीको निर्माणमा अटो भान बिस्मार्क, इटलीको निर्माणमा गैरीवाल्डी र कैबुर तथा फ्रान्सको निर्माण नेपोलियन बोनापर्टले आ–आफ्ना समयमा खुनपसिना एकठ्ठा गरी अजस्र योगदान गरेकै हुन् । ती देशहरूमा ती राष्ट्र नायकहरूको उँचो र धरोहरमय व्यक्तित्व स्थापित छ । तत् देशका जनता सँधै तिनीहरूका सम्मानमा श्रद्धा हुन्छन् । गौरवले गौरवानुभूतिको श्वास फेर्छन् । हाम्रो देशमा मात्र पृथ्वीनारायणका बारेमा अनेक पन्थ र मन्थका विचारहरूको छिनाझप्टी चल्छ । चलाइन्छ । स्वार्थप्रेरित यस्ता कुराहरू गर्नमा मानिसहरू निकै रौसिन्छन् किनकि यहाँका मानिसहरूलाई एकर्काका कुरा गर्न र कुरा काट्न पउल फुर्सद् छ ।
कुनै व्यक्तिलाई फरक व्यक्ति वा ईतिहासका पात्र मन नपर्न सक्छन् त्यो उसको व्यक्तिगत रूची र स्वतन्त्रताको कुरा हो । विशेषताका आधारमा ऐतिहासिक पात्रोपपात्रका अनेक विरोधाभाषहरू पनि हुन सक्छन् । त्यसो भयो भन्दैमा कोही कसैको ऐतिहासिक व्यक्तित्व र उसका योगदानलाई समूल रूपमा नामेट पार्न सकिन्नँ । मानिस मानिस नै हो ऊ भगवान् होइन । भगवान् त समाजलाई अराजक हुनबाट बँचाउने धर्मभीरूहरूका काल्पनिक पात्र या हतियार मात्रै हुन् । व्यक्ति होस् या ईतिहासका पात्र उनीहरूलाई उनीहरूका समयका काम र योगदानहरूका आधारमा नै रहन दिइनु पर्छ । अति प्रशंसाले भगवान् बनाउने र अति गालीले सामान्य पनि बनाउनु हुन्नँ ।
ईतिहासका पात्रको आज ‘स्वट एनालाइसिस्’ गर्ने बेला आएको छ । तर, त्यो कसले गर्ने त्रिविले, एकेडेमीले, मन्त्रिपरिषद्ले, मन्त्रालयले या विद्यालयले ? प्रश्न यहाँनेर पनि उठाउन सकिन्छ ।
अति चाकरी र अति गाली गरेर कुनै पनि ऐतिहासिक धरोहरहरूको स्खलन गर्न हतारिनु हुन्नँ । अहिले नेपालमा पृथ्वीनारायणको भएको व्यक्तित्व (नभएको व्यक्तित्व खोजेर महिमामण्डन गर्नु हुन्न) लाई पनि पानीले पखाल्ने काम गर्न थालिएको छ । जुन चित्तबुझ्दो छैन। अहिलेको अहम् सवाल यही हो ।
पृथ्वीनारायण ईतिहास हुन् । ईतिहासलाई सम्मान गर्नुपर्छ । पूर्खाको नासो र धरोहर कै रूपमा आज हामीले पाएको देश अझ अघि बढाउनु पर्छ । सुदूर भविष्यको यात्रा तय गर्दा भोली गएर आजका घटनाहरू नै ईतिहास बन्ने छन् । हिजो भनेको बाउ हो । आज सन्तती । बाउको सम्मान सन्ततीले गरे पो नाति पनातिले आफूभन्दा अघिल्ला पुस्ताको मानभाउ राख्छन् । मनितो गर्छन् । सम्झन्छन् । गुणगान गर्छन् । आफूचाहिँ विगतको रत्तिभर सम्मान नगर्ने अनि आफूलाई पछिल्लो पुस्ताले चाहिँ अकण्टक मान्नु पर्ने भन्ने कुरा अहिलेका राजनीतिक नेताहरूको रहेको छ । जुन सोह्रै आना चित्तबुझ्दो छैन ।
विगतलाई गाली गरेर भन्दा उसबाट पाठ सिकेर आगतलाई स्वर्णीम् बनाउनु नै समाजका अभियन्ता र राजनीतिज्ञको काम हो । जनसामान्यले त गुणदोषका आधारमा हरेक ऐतिहासिक पात्रको छवि आफ्ना मनमा बनाएको हुन्छ । त्यो बन्न पनि समय लाग्छ र मेटिन पनि समय लाग्छ । विदेशीका इसारामा नाचेका नेता, विदेशीका दृश्यादृश्य रकमबाट पालितपोसित पालिस गरेको अमौलिक विचार र संसारमै डेट स्क्पायर भैसकेका थोत्राथाङ्ना दर्शनको लिउन लगाएर शासन गरी अबको नेपाल अघि जान सक्दैन । बीपी बिर्सने काँग्रेस, मदन बिर्सने एमाले, ऐतिहासिक महापुरुष बिर्सने माओवादी मोर्चा, सहिद बिर्सने राप्रपा र माटो बिर्सने मधेशवादीहरूको कार्यशैली र व्यवहारले जनतामा निराशा काला बादलहरू मडारिन थालिसकेका छन् ।
जसको घनिभूत असर चुनावमा नपर्ला भन्न सकिन्छ । जसरी समय प्रतिक्षण बदलिइरहेको छ त्यसैगरी मतदाताहरू पनि निर्निमेष परिवर्तन भैरहेका छन् । यो कुराको समूल हेक्का पार्टीहरूले राखेको देखिएन । दुःख यस मानेमा हो । नेपाल बनाउने भनेका नेपाली नै हुन् र ती नेपाली नेपालमै छन् । कोही बाध्यता अनि समस्याले घरदेश सिँगार्न परेदश पुगेका होलान्। अझ साँचो अर्थमा नेपाल त ती नेपालीले बनाउने छन् जो काम र मामको खोजीमा यतिखेर विदेशविदेश भौंतारिइरहेका छन् ।
मरेर कफिनमा आएकाहरू त मर्ने नै भए बाँकी बाँचेर कुनै न कुनै सीप सिकेर आएका चालिसदेखि पचास लाखसम्मका संख्यामा नेपाल फर्किने ती ईखालु युवाले जब नेपालमा नयाँनयाँ तरक्की सहितका अनेकानेक काम गर्ने छन् अनि नेपाल नवनिर्माणको श्री गणेश हुनेछ । तत्पश्चात् शंखनाद् हुनेछ –नेपालीय पुनर्जागराणको ।
युवाका ऊर्जाशील नेपालीले भोलीको नेपाल बनाउने छ । अवश्य बनाउने छ । समयक्रमका खेल हुन् –सबै ईतिहासका घटना र पात्रहरू । पृथ्वीनारायण शाह आफैँमा अधिनायक भएर त्यो समय उदाएका पक्कै होइनन् । समयले एउटा लौह व्यक्तित्वको खाँचो महसुस गरिरहेको थियो । उनमा भिजन, मिसन र गोल थियो। उनका समकक्षी, समवयी र समधर्मी शासकहरूमा त्यो भएन । उनकै बाबु बराजुहरूमा पनि त्यो गुण पक्कै थिएन । भएको भए पृथ्वीनारायाण शाहभन्दा अघि पनि द्रव्य शाह थिए । राम शाहको त कीर्ति नै उज्यालो भएको हो । किन सकेनन् त तिनीहरूले ?
समयले नै असल नायक खोजी गर्ने हो । समयले नै नायकलाई स्थापित बनाउने एवम् अजरामर तुल्याउने हो । यस मानेमा पृथ्वीनारायण सामयिक मनोविज्ञान बुझ्न सक्ने सक्षम, काबिल, योग्य र उभारपूर्ण व्यक्तित्व जँचे । अनेक तरहले उनले जनईच्छा बुझे ।
छरिएर रहेका छिमेकी देशका भौगोलिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक र आर्थिक अध्ययन गरे । भुरे टाकुरे राज्यका राजाहरूको स–साना कुरामा हुने नियमित सँधैको किचलो र त्यसबाट जनताले पाउने दैनिक समस्यालाई आफ्नो बुद्धि र विवेक बन्धकी राखेर नकार्न चाहेनन् । धुलोबाट तरबार उठाएर गोरखा राज्यको नेतृत्वमा नेपाल राज्यको एकीकरण गरे ।
एकीकरण उनको लहड, सनक, ईष्र्या, क्षोभ, महत्वाकांक्षा, अहम् र पागलपन पक्कै होइन । युद्ध मैदानमा उनले आफ्ना सहोदर भाइहरूको अंगभंग भएको समेत देख्नु प¥यो । कतै त सगोत्रीको दैहिक क्षतिसमेत भयो ।
राजकाज, भोगविलास, ऐसआराम र मोजमज्जा केही नभनी बीस वर्षको चढ्दो र बढ्दो उमेरमा राज सिँहासन सम्हालेका पृथ्वीनारायण जीवनपर्यन्त युद्धमै व्यस्त र मस्त भए । उनका दिव्योपदेशलाई अहिले पनि हामी राजनीतिक दर्शनका गीता मान्छौं। उनले देखाएको बाटो र विचारमा नेपालले २४० वर्षको यात्रा तय ग¥यो । यो चानचुन कुरा होइन । आज पनि त्यसैको जगमा हिँड्दैछ । साँघुरो बाटोलाई चौडा पार्ने काम सन्ततीको हो तर त्यसमा मानव मलमूत्र र विष्टा छर्ने काम भने होइन । अहिले भएको त्यस्तै छ । यसमा पक्कै हामी दोषी छौं । ईतिहास त वाचाल गतिमा अघि बढिरहेको छ । कालान्तरमा त्यसले मूल्याङ्कन अवश्य गर्ला ।
उनको एकीकरण कार्यमा व्यक्ति, रजौटा, लोक र वृहत् समाजको समर्थन थिएन भने त्यतिखेरै उनको चारैतिरबाट उधूम विरोध हुन्थ्यो । शत्रुहरूका साँठ गाँठबाटै अनन्त धावा बोलिन्थे । एक्लिन्थे उनी । मटियामेट र पत्तासाफ हुन्थे । तर भएनन् किन ? उनका सुकार्यमै राज्य निर्माण भयो । एक ढिक्का भयो । सबल राष्ट्रका रूपमा नेपाले विश्व रंगमञ्चमा प्रवेश गर्ने मौका पायो । ल पृथ्वीनारायण शाहलाई एकछिन अधिनायकवादी शासक नै मानौं न त ।
उनीपछिका कुनकुन शासकले नेपालमा केकस्तो भिजनमा शासन गरे त्यो पनि हेरौं । राणाराज्यको एक शताब्दीलाई राजाहरूको शासन खोपीमा राखेका देउताझैँ मान्ने हो भने धेरै पछि आएर राजा महेन्द्रका पालामा नेपालले विश्व परिवेशमा आफूलाई दह्रोसँग उठाएको होइन र ? भौतिक विकासका विविध पाटाहरू, विकास क्षेत्रको अवधारणा, सडक, पुल, मुद्रा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, एकेडेमी, बैंकहरूको स्थापना, उद्योगधन्दाका आधारहरू, गाउँको विकासका लागि गाउँफर्क अभियान आदि । समयले जुनबेला जे चाहन्छ त्यो दिनु के शासकको अपराध हो ? अझै अघि बढेर भन्दा महेन्द्रीय पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्रनीतिमा समाहित भई आज पनि हामी त्यही आधारमा अघि बढिरहेका छौं ।
नव नेपालका लागि ठीक भएन भने खै त त्यो परिमार्जन गरिएको ? बरू नेपालको छिमेक नीति यतिखेर ढुलमूले र स्वार्थगन्धले प्रेरित देखिन्छ । पार्टीपार्टीका विदेश र छिमेक नीति अतीव घिनलाग्दा छन् । भारत र अमेरिकाको विदेश नीति हेरौं न । जो सत्तामा गए पनि एक इन्च फेरबदल हुँदैन र पनि देश हाँकेकै छन् त्यहाँका नायकहरूले । हाम्रोमा मात्र किन नौटङ्की ? किन यस्तो गतिगराँस ? यतिखेर कोही मनुवा चित्तबुझ्दो उत्तर दिनसक्ने ल्याकतमा छैनन् ।
पृथ्वी जयन्तीमा विदा दिइनु या नदिइनुको सवाल होइन । सवाल राष्ट्र निर्माताको पगरी गुथाइदिनु या नगुथाइदिनुको पनि होइन । सवाल के भने यो राज्यलाई विश्वमा एक विकसित र स्वतन्त्र राज्यका रूपमा अखण्ड कसरी राखिरहन सकिन्छ भन्ने हो ।
आम जनतामा पृथ्वीनारायण प्रतिको सम्मान, आदर भाव रत्तिभर घटेको छैन अझ बढेरै गएको छ । मात्र नेताका व्यक्तिगत र पार्टीगत लाजका जिनिशलाई चेतनशील जनताले कुरीकुरी गरिदेलान् कि भनेर हतासाले प्रायोजित विचार बोलिएका होलान् ।मानिसको सम्झना मनमा हुनुपर्छ न कि आँखामा । पृथ्वीनारायण जो राष्ट्रिय अखण्डताका प्रतीक हुन् ती नेपाली मनमनमा विराजमान छन् । यति भन्न कुनै सालको पुस २७ गते नै कुर्नु पर्छ भन्ने छैन ।
राष्ट्रकवि माधव घिमिरे भन्छन्ः
‘पारिन्छ सत्ता जब खण्डखण्ड
रहन्छ राष्ट्र त्यहाँ के अखण्ड ।
थुतिन्छ पत्ता जब खातबाट
सिद्धिन्छ शोभा अनि फूलबाट ।। (राष्ट्रनिर्माताः खण्डकाव्य)
यति पढिसकेपछि आदरणीय पाठकहरू यहाँहरू नै शान्त चित्तले एकछिन मनन गर्नुहोस् र स्वनिर्णयमा पुग्नुहोस् । के पथ्वीनारायण शाह ‘राष्ट्रघाती’ नै हुन् त ? उनको जन्मजयन्ती मनाउनु अपराध नै हो त ? विज्ञ नेपालीमा चेतना भया । –साभार पूर्वेली न्यूज
प्रकाशित मिति: शनिवार, पुष २६, २०७६, १२:०१:००
नेपाल–भारत सीमा नाका बन्द कहिलेसम्म ?
‘म अझैं सानी छु’
नेपाली काँग्रेस ईतिहासमा सीमित नहोस्
नेपालगन्जतिर बोलिने अवधी भाषा एक बिश्लेषण
शनिवार, असार २७, २०७७ सेतोखरी
अवधी साहित्यको दुईवटा प्रमुख शाखाहरुको बर्णन भेटिन्छ, एउटा भक्तीकाब्य भने अर्को प्रेमकाब्य । भक्तीकाब्यका प्रमुख रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास र उनको काब्य राम चरित मानस अवधी भाषामा हो भने प्रेमकाब्यको प्रमुख रचनाहरु मद्धेमलिक मुहम्मद जायसीरचित सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ ‘पद्मावत’ हो । पुरा पढ्नुहोस्
गोर्खालीहरुको राज्य फिर्ती
शनिवार, असार २०, २०७७ सेतोखरी
कुमाउ र गढवालमा २५ वर्षको गोर्खाली शासनको दौरानमा गोर्खाली शाशकहरुबाट राज्य सञ्चालन कार्य कौशलमा केही कमी पनि भएको हुनसक्छ । तर, पनि धेरै कुरो सह्रानीय पनि छन् । त्यस्तै एउटा राम्रो तथ्यमा, त्यस बेलाको त्यस क्षेत्रको गोर्खाली फौजमा कुमाउनी र गढवाली सैनिकहरु पनि रहेको देखिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
बाँकेमा आईतबारदेखि पुनः लकडाउन बिहिवार, श्रावण १५, २०७७ 24732
नो टेन्सन ! कोरोना परीक्षण अब बागेश्वरी ल्यावमा
डरलाग्दोगरि बढ्दै नेपालगन्जमा कोरोना
बाँकेका ८ तहको ४५ करोड, प्रदेशमा ४ अर्ब बेरूजु
बाँकेमा डाक्टरसहित १२ जनामा कोरोना संक्रमण
बाँकेमा निषेधाज्ञा जारी, कोरोना परीक्षणको मापदण्ड परिवर्तन